January 21, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on पाँच कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुँदै
काठमाडौं, माघ ७। सेयर बजार उकालो लागिरहेकै बेला पाँचवटा कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अन्तिम स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बोर्डले पाँचवटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनेगरी अन्तिम प्रक्रिया टुंग्याएपछि साना लगानीकर्ता हौसिएका छन् । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज निलम्बनमा परेपछि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका […]
बढ्याे सुनको मूल्य हेर्नुहोस्।
January 19, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on बढ्याे सुनको मूल्य हेर्नुहोस्।
काठमाडौं। साताकाे चाैथाे दिन नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य एक सय रुपैयाँले बढेकाे छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार सात सय रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि मंगलबार छापावाल सुन तोलाको ९२ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९२ हजार दुई सय रुपैयाँ […]
सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट हेर्नुहोस्।
January 16, 2022 January 16, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट हेर्नुहोस्।
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज आइतबार बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । गत मंगलबारदेखि वृद्धि हुँदै आएको सुनचाँदीको मूल्यमा भने आज गिरावट आएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार प्रतितोलामा ९२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आइतबार ३ सय रुपैयाँले घटेर ९२ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको […]
घट्यो सुनको मूल्य हेर्नुहोस् ।
January 10, 2022 January 10, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on घट्यो सुनको मूल्य हेर्नुहोस् ।
काठमाडौँ / सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । आइतबार स्थिर रहेको सुनचाँदीको मूल्य सोमबार भने घटेर कारोबार हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा आज सुनको भाउ प्रतितोला ३०० रुपैयाँ र चाँदी पाँच रुपैयाँले घटेको छ । महासंघका अनुसार आइतबार सुनको भाउ प्रतितोला ९१ हजार ६०० रुपैयाँ रहेकोमा सोमबार भने […]
सुनचाँदीको मुल्य आज कति ? हेर्नुहोस्।
January 9, 2022 January 9, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on सुनचाँदीको मुल्य आज कति ? हेर्नुहोस्।
काठमाडौं, २५ पुस । कारोबारको साताको पहिलो दिन आइतबार आज सुनचाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ९१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज पनि सोही मुल्यमा कारोबार भएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार आज चाँदी प्रतितोला १२ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो पनि पड्नुहोस। आइतबारका लागि यस्तो […]
घट्यो सुनको मूल्य हेर्नुहोस।
January 6, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on घट्यो सुनको मूल्य हेर्नुहोस।
काठमाडौँ, २२ पुस: सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ५०० ले घटेर रु ९२ हजार ३०० तोकिएको छ । पहेँलो धातु अधिल्लो दिन प्रतितोला रु ९२ हजार ८०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९१ हजार ८०० कायम भएको छ । […]
घट्यो सुनको मूल्य हेर्नुहोस्।
January 3, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on घट्यो सुनको मूल्य हेर्नुहोस्।
काठमाडौँ, १९ पुस: सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ३०० ले घटेर रु ९३ हजार १०० मा आएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९३ हजार ४००मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला रु ९२ हजार ६०० कायम भएको छ, जसको […]
खुसीको खबर : ५० किता पर्ने आइपीओ आउने मिति सार्बजनिक ! छुट्ला है ।
January 3, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on खुसीको खबर : ५० किता पर्ने आइपीओ आउने मिति सार्बजनिक ! छुट्ला है ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको विषेश साधारणसभाले सर्वसाधारणमा ६० लाख कित्ता आइपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न सभाले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरु बीचको पुंजीको अनुपात ८७.१० : १२.९ ० हुने गरी मिलान गर्ने र यसरी शेयरको संरचना परिवर्तन पश्चात सर्वोत्तम सिमेन्टले ६० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई बुक बिल्डिङ्ग विधि बाट जारी गर्ने निर्णय गरेको […]
८ अर्ब बढी लगानीको अर्घाखाँची सिमेन्ट आइपिओ ल्याउने तयारीमा
January 2, 2022 January 2, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on ८ अर्ब बढी लगानीको अर्घाखाँची सिमेन्ट आइपिओ ल्याउने तयारीमा
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले यो वर्ष एक करोड २५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ। योसँगै कम्पनीले चाँडै प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक रमेश थापाका अनुसार बजारमा माग र खपत बढेसँगै उत्पादन बढाउँदै लगिएको हो। हाल दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरी अर्घाखाँचीले वार्षिक एक […]
January 2, 2022 January 2, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य
आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार सात सय रुपियाँ कायम भएकोमा आज सात सय रुपियाँले बढेर प्रतितोला ९३ हजार चार सय रुपियाँ कायम भएको हो । आज तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार नौ सय रुपियाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ ।आइतबार चाँदीको […]